Yuzu: စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ် Nintendo Switch Emulator | Linux မှ
Yuzu - စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ် Nintendo Switch Emulator
အခြားဖြစ်ရပ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာများကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည် GNU / Linux အတွက်မူလဂိမ်း။ နှင့်အခြားသူများအတွက်ကျနော်တို့အကြောင်းကိုပြောပြီပါပြီ ဂိမ်းပလက်ဖောင်းများသို့မဟုတ်အက်ပ်များအခြားသူများအကြား Steam, GameHub, Itch ကဲ့သို့။ သို့သော်ကောင်းသောကစားခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေလည်းရှိပါတယ် GNU / Linux ရှိဂိမ်းများ နှင့် Console emulatorsRetro နှင့် Modern တို့ပါရှိသည်။
ထို့ကြောင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာတစ်ခုကိုလေ့လာကြမည် ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် app ကို ခေါ်ဆိုခ "ယုယု"တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် Nintendo ပြောင်းလဲ Emulator တီထွင်ခဲ့သည် C ++ ပိုမိုကောင်းမွန်သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုကမ်းလှမ်းရန်နှင့်၎င်းတွင်တက်ကြွစွာထိန်းသိမ်းထားသောတည်ဆောက်မှုများပါဝင်သည် Windows နဲ့ Linux
RPCS3: 2021 PS3 Cross-Platform Emulator ပထမ Update ကို
ပုံမှန်အတိုင်းဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ကိုအပြည့်အဝမလေ့လာခင်၊ အချိတ်အဆက်တွေကိုချက်ချင်းထားခဲ့လိမ့်မည် ယခင်ဆက်စပ်ရေးသားချက်များအမှု၌မည်သူမဆို၏နယ်ပယ်သို့စူးစမ်းလိုသည် GNU / Linux ရှိဂိမ်းများ အလွယ်တကူလုပ်နိုင်တယ်
"RPCS3 သည်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ် cross-platform emulator နှင့် Sony PlayStation3Game Console အတွက် debugger ဖြစ်ပြီး Windows, Linux နှင့် BSD အတွက် C ++ ၌ရေးထားသည်။ RPCS3 ဟာ Google Code မှာအစပြုခဲ့ပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာ GitHub သို့ပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရသည်။ ယနေ့တွင် RPCS3 ကိုအဓိက developer နှစ် ဦး မှအဓိကထုတ်လုပ်သည်။ Nekotekina, kd-11 နှင့် GitHub ပံ့ပိုးသူများ၏အောင်မြင်သောအဖွဲ့သည်ကျောထောက်နောက်ခံပြုသည်။ " RPCS3: 2021 PS3 Cross-Platform Emulator ပထမ Update ကို
AppImage ဂိမ်းများ - ဘယ်နေရာကိုများများ AppImage ဂိမ်းများရနိုင်မလဲ။
1 Yuzu: Nintendo Switch Emulator
1.1 Yuzu ဆိုတာဘာလဲ
Yuzu: Nintendo Switch Emulator
သင့်ရဲ့အဆိုအရ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်အောက်ပါအတိုင်းအကျဉ်းချုံးဖော်ပြထားသည် - \_ t
"Yuzu သည် Citra ဖန်တီးသူများထံမှ Nintendo Switch အတွက်စမ်းသပ် open source emulator ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို C ++ ဖြင့်သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူရေးသားထားပြီး Windows နှင့် Linux အတွက် builds များကိုတက်ကြွစွာထိန်းသိမ်းထားသည်။"
မှတ်ချက်: Citra တစ် ဦး ကိုရည်ညွှန်းသည် Nintendo 3DS အတွက်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် emulator ကဆိုပါတယ် console ကို၏အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းအများအပြားကစားနိုင်စွမ်း။ ထို့အပြင်၎င်းကို C ++ တွင်သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူမှုနှင့်အတူရေးသားထားပြီး Windows, Linux နှင့် MacOS များအတွက်တက်ကြွစွာထိန်းသိမ်းထားသည်။ ၎င်းနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုအောက်ပါလင့်ခ်များတွင်ကြည့်နိုင်သည်။ တရားဝင်ဝက်ဘ် y FlatHub စတိုး.
၎င်းသည် GPL 2.0 လိုင်စင်အောက်တွင်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်
၎င်းသည် cross-platform တစ်ခုဖြစ်ပြီး Windows နှင့် Linux အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
၎င်းကို C ++ တွင်ထုတ်လုပ်ထားသည်
Intel Core i5-4430 သို့မဟုတ် AMD Ryzen31200 ပရိုဆက်ဆာတီထွင်သူများက Intel Core i5-10400 သို့မဟုတ် AMD Ryzen53600 ပရိုဆက်ဆာအသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်။
သီးခြားသို့မဟုတ်ပေါင်းစည်းထားသောဂရပ်ဖစ်များတွင်ဗီဒီယိုအတွက်အနည်းဆုံး 8 GB နှင့် 12 GB RAM မှတ်ဉာဏ်အကြားရှိသည်။ ထို့အပြင်အကြံပြုထားသည့်အတိုင်းဗီဒီယိုအတွက် 16 GB RAM memory ကိုရရှိနိုင်သည်။
OpenGL 4.6 သို့မဟုတ် Vulkan 1.1 နှင့်လိုက်ဖက်သော hardware နှင့် driver ။ Half-Float နှင့် 4GB VRAM အထောက်အပံ့ကိုအကြံပြုထားပါသည်။ ထို့အပြင် GNU / Linux တွင်အနည်းဆုံး 1030 GB NVIDIA GeForce GT2သို့မဟုတ်7GB AMD Radeon R2402ဗီဒီယိုကဒ်လိုအပ်ပြီး ၄ GB NVIDIA GeForce GTX 1650 သို့မဟုတ် AMD Radeon RX Vega4ဗီဒီယိုကဒ် 56 GB လိုအပ်သည်။
ဤ သတင်းအချက်အလက်နှင့်ပိုပြီး အောက်ပါ link များပေါ်တွင်ချဲ့ထွင်နိုင်:
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေ့အမှု၌, သင်၏ download လုပ်ပါ installer / executableငါတို့သည်သင်တို့၏အသုံးပြုမှုကိုပါပြီ «ဒေါင်းလုပ်အပိုင်း», ပြီးတော့ကျနော်တို့အပေါ်ကိုနှိပ်ပါ Linux အိုင်ကွန်များ (Penguins) ထဲမှာဖိုင်ကိုဝင်ရောက်ဖို့ .AppImage အမျိုးအစား ရရှိနိုင် ဒါဟာအစသင့်ရဲ့ထံမှဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ် GitHub ဆိုဒ် ကိုနှိပ်ပါ ဒီမှာ.
တစ်ချိန်ကသင့်ရဲ့လက်ရှိ download လုပ်ပါ အရင်းအမြစ်ဖိုင် အတွက် GNU / Linux များ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်အတိုင်းအကြောင်းကို Linux ကို Respin လုပ်ပါ ကိုခေါ် အံ့ဖွယ်အမှုများ GNU / Linux အပေါ်အခြေခံပြီးသော MX Linux ကို 19 (Debian 10), ငါတို့အောက်ပါတည်ဆောက်ခဲ့သည် «Snapshot MX Linux လမ်းညွှန်»ကျွန်ုပ်တို့၏စူးစမ်းရှာဖွေသူနှင့်အတူ graphical interface မှတစ်ဆင့်ကွပ်မျက်ခြင်းခွင့်ပြုချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးခဲ့သည်။ နောက်မှတွေ့ရတဲ့အတိုင်းအဲဒါကိုလုပ်ဖို့၎င်းကိုနှိပ်လိုက်ပြီးပြီ။ နောက်ဆုံးမှာတော့အဲ့ဒီဂိမ်းကိုဂိမ်းကဏ္ in ထဲက Applications menu ပေါ်က link တစ်ခုကျွန်တော်တည်ဆောက်ခဲ့တယ်။
အမှု၌သင်သိလိုလျှင်, ၏လိုက်ဖက်တဲ့အဆင့်ကို Nintendo Switch ဂိမ်းများ emulator နှင့်အတူ, သူတို့စူးစမ်းနိုင်ပါတယ် Yuzu လိုက်ဖက်တဲ့ဂိမ်းလမ်းညွှန်.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" ခေါ်ဒီစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် app အကြောင်း «Yuzu»အဲဒါက Nintendo ပြောင်းလဲ Emulator တီထွင်ခဲ့သည် C ++ ပိုမိုကောင်းမွန်သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်နှင့်၎င်းတွင်တက်ကြွစွာထိန်းသိမ်းထားသောတည်ဆောက်မှုများပါဝင်သည် Windows နဲ့ Linux; တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Yuzu - စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ် Nintendo Switch Emulator
Fury Unleashed: Linux ပေါ်တွင်ကစားရန်ပျော်စရာကောင်းသောခေတ်သစ်လှုပ်ရှားမှုဂိမ်း
Gaea, Mace and Soar: Xiaomi Open Source - အပိုင်း ၂